Dowlada oo wada qorshe shaqo abuuris hor leh - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dowlada oo wada qorshe shaqo abuuris hor leh
La daabacay onsdag 8 augusti 2012 kl 11.28
Dowlada ayaa dooneysa in ay abuurto shaqo fara badaniyada oo taasi u mareysa in shirkadaha lagu soo jiito degmooyinka ay ka jiraan shaqalaanta saa'idka ah ayna ku nool yihiin dadka waxbarashadooda hooseeyso iyada oo dowlada hoos u dhigi doonto lacagaha bulshada ee shirkadahaasi ay bixinayaan.
Baaraha dowlada ee arrintan mas'uulka ka ah Christer Sjödin, ayaa shalay soo gudbiyay hidisihiisa iyada oo uu soo bandhigay ilaa iyo sodomeeyo soon oo la rajeynayo in shirkadaha ay sjhaqo u abuuraan dad fara badan.
'' Meelaha aan u magac dareyno soonayaasha cusub, waa goobaha ay ka jiraan shaqo la'aan aad u sarreeysa, oo ay sidoo kale ku nool yihiin dad aad u badan oo qaata lacagta ceydha heer aqoonta dadkana ay hooseeyso. Waa wax la dhihi dadka bulshada banaanka ka jooga, ayuu Christer Sjöden baaraha dowlada ee qorshahan cusub soo bandhigay.
Dowlada ayaa sheegtay in qorshahan cusub ee shaqo abuurista uu diirada saari doono magaalooyinka ay ku nool yihiin dad ka badan 4000 oo qof oo tirada shaqeeysa ay ka hooseeyso 44 boqolkiiba, dadka ceyrta qaatana ay ka badan yihiin 7 boqolkiiba, heerka dadka aan dhammeysan waxbarashada dugsiga sarana ka badan yihiin 31 boqolkiiba.
Hanaanka shaqo abuurista ee shirkadaha taga meelo gaara oola qoondeeyay lacagta dowladana hoos loogu dhigay si shaqaale badan u qortaan, ayaa hore waxuu ugu jiray dalalka talayaaniga iyo faransiiska iyada oo dalka faransiiska goobahaasi loogu magac daray waxa afka Iswidhishka lagu yiraahdo "Skattefria Urbana områden" deegaanada cashuurta xorta ka ah ee magaalooyinka.